Yealink UVC20, wehel wanaagsan oo xagga shaqada ah [Dib u eegista] | Wararka Gadget
Yealink UVC20, wehel wanaagsan oo xagga shaqada ah [Dib u eegista]
Miguel Hernández | 08/06/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 29/05/2021 13:57 | qalabka, General, Reviews
Shaqaynta teleefonku waa timid oo waxay umuuqataa inay sii jirto. Waxaa jira shirar badan, soo bandhigis ama shirar aan si isdaba-joog ah ugu qabanno Kooxaha, Skype, Zoom ama wixii kale ee suuqa yaal. Si kastaba ha noqotee, waa xilliyadan markii aan ogaanay in laga yaabo in mareegaha webka iyo makarafoonka kumbuyuutarkaagu uusan fiicnayn ...
Waa lagama maarmaan in la hagaajiyo waxqabadka kamaraddeena iyo makarafoonkeena haddii aan dooneyno inaan helno natiijooyin wanaagsan, tanna waxaan ku heysanaa xalal caqli badan. Waxaan si qoto dheer u eegeynaa websaydhka 'Yalink's UVC20 webcam', oo ah wehelka ugu fiican kulammadaada Kooxaha Microsoft iyo waxyaabo kaloo badan.
3 Adeegso khibrad
Xaaladdan oo kale, in kasta oo dareenka ah in baakadaha, xaqiiqadu waxay tahay in badeecada si wanaagsan loo gaadhay. Ka samaysan caag gebi ahaanba, Waxaan ku leenahay muraayad / methacrylate daaha hore oo dhan oo siinaya dareen quruxsan. Dareemka qeybta hore wuxuu leeyahay dhammaan caan halka godka makarafoonka uu ku yaalo dhanka midig iyo bidix LED-ka oo tilmaamaysa xaalada aaladda. Waxaan ku sii soconeynaa ugu yaraan nidaam xiritaanka muraayadaha oo si buuxda u shaqeynaya kaas oo noo oggolaan doona inaan helno asturnaanta.
Qiyaasaha: 100mm x 43mm x 41mm
Dhinaceeda, waxaan leenahay saldhig leh nidaam faseex ah oo ka dhigaya kamaradani nidaam guud oo caalami ah oo si buuxda loogu heli karo dhammaan kormeerayaasha iyo laptop-yada, xitaa haddii aan jeclaan lahayn inaan ka faa'iideysan karno dunta guud ee saddexda geesood ee salka, ama ku raaxeysanno nidaamka noo ogolaanaya inaan si toos ah uga tagno miiska. Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo beddel ah oo ay na siiso, gaar ahaan haddii aan tixgelinno in kamaraddu ay awood u leedahay inay iskeed isu rogto oo si toos ah iyo xag ahaanba ah. Kala duwanaansho calan ku jira kamaradan oo leh makarafoon ku dhex jira.
Waxaan ku raaxeysaneynaa kamarad websaydhada ah 'Yealink UVC20' oo bixisa baaxad autofocus ah oo udhaxeysa 10 sentimitir iyo 1,5 mitir. Waxaan leenahay fiilo gadaal ah USB 2.0 2,8 mitir kaas oo ka badnaan doona ku dhowaad dhammaan goobaha. Si kastaba ha noqotee, waa waqtigii diirada la saari lahaa dareemahaaga, waxaan leenahay qaab 5 MP CMOS oo leh f / 2.0 furitaan taas oo awood u leh inay ku bixiso wax soo saar fiidiyoow ah xalka 1080p FHD ee 30FPS oo ah awoodda ugu badan. Natiijooyin wax ku ool ah waxay leedahay autofocus oo si muuqata si fiican oo firfircoon ugu shaqeysa kala duwanaanta habdhiska iyo iftiinka.
Qalabka wuxuu la jaan qaadayaa Windows iyo macOS dhib la’aan. Dhinaceeda, makarafoonka waa omni-jiheyn wuxuuna yeelan doonaa SNR ugu badnaan 39 dB. Soo noqnoqodka jawaabta, haa, waa mid aad u adag inta udhaxeysa 100 Hz iyo 12 kHZ, natiijooyin aad ufiican. Wax dhibaato ah kamaanan helin awoodaha farsamada, runti waxaan dhihi karnaa waxaan la yaabnay awooda Yealink UVC20 si ay u bixiso natiijooyin wanaagsan xitaa iyadoo ay jiraan dhibaatooyin iftiin muuqda oo ka jira aagga qabashada.
Kaamiradu waxay leedahay nidaam si buuxda loogu xiro-iyo-ciyaar, Tani waxay ka dhigan tahay inaanan sameyn doonin nooc kasta oo qaabeyn ah ka hor intaan la isticmaalin, xaqiiqda ah inaanan xitaa haysan barnaamijyo la soo dejisan karo ujeedkan ayaa markhaati u ah tan. Mar alla markii aan ku xirno kaamiradda Yealink UVC20 dekedda USB-ga, waxaan ka dhex helnaa ilaha maqalka iyo muuqaalka markii aan wicitaanno fiidiyoow ah sameyno. iyada oo loo marayo barnaamijyada kala duwan ee ujeedkan. Xaaladdan oo kale waxaan ka heli doonnaa kamaradda iyo makarafoonka kamaradda lafteeda midba gooni, taas oo noo oggolaaneysa inaan adeegsanno makarafoonkeenna gaarka ah haddii aan doono.
Waxaan dhawaan u adeegsanay kamarada si aan uqoro Podcastka asbuuclaha ah ee asxaabta hada iPhone ah waxaadna ka arki kartaa fiidiyaha gundhigga ah. Tani waa habka ugu habboon ee lagu arko waxqabadka guud ee kamaradda, in kastoo haa, xaaladdan waxaan u adeegsannay il maqal kale ah. Kaamiradu waxay leedahay autofocus si dhakhso leh u shaqeysa, taas oo iga yaabisay xitaa xaaladaha nalalka oo liita, tanina waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee tixgelinta la siinayo, xaqiiqda haysashada autofocus waxay noo oggolaan doontaa inaan hortiisa u dhaqaaqno iyadoon dhibaato laga qabin ereyadan
Kaamirada ma ahan mid aad u jaban, dhibaatada ugu weyn ee aan la kulmayna waa xaqiiqda ah inuusan ku qorneyn wax soo saar laga heli karo Amazon. Waad heli kartaa shabakadaha sida Onedirect qiimo lagu taliyay oo ah 89,95 euro, Iyadoo la tixgelinayo inay tahay shey la caddeeyey oo loogu talagalay Kooxaha Microsoft iyo Zoom, uma muuqato wax badan.
Waxqabadka waa waxa qofku ka filan karo badeecad leh astaamahan, isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda kala duwanaanta ballaaran ee saldhigeeda iyo horumarka hufan ee diiradda tooska ah inta lagu jiro dhammaan wicitaanada fiidiyowga, shaki la'aan alaab aan kugula talin karno haddii aad raadineyso inaad horumariso bandhigyadaada.
Ku dhejiyay: 8 Juunyo 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: May 29 ee 2021
Qaabeynta / Adeegsiga
Naqshadaynta iyo walxaha dareema "qiime"
Saldhig aad u badan oo si fudud loo isticmaali karo
Natiijo aad ufiican oo kamarada iyo autofocus
Waxaan u xiisay adabtarada USB-C
Dhibco aad u yar oo iib ah Spain
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Yealink UVC20, wehel wanaagsan oo xagga shaqada ah [Dib u eegista]